Wararka - Talooyinka caafimaadka deyrta
Tilmaamaha caafimaadka deyrta
Dayrta waa xilli goosasho wanaagsan. Sidoo kale waa xilli sare oo cuduro. Qaar badan cudurada ayaa u nugul soo noqoshada xilliga dayrta. Sida laga soo xigtay cilmi-nafsiga, saameynta darteedcimilada iyo arrimo kale, dhacdooyinka niyad-jabka iyo cudurrada kale ee maskaxda ee dayrta ayaa si weyn u kordhay. Sidaa darteed, deyrta waa inay fiiro gaar ah u yeelato nidaamintashucuurta, ku hayso dabeecad rajo leh wax kasta, la xiriir asxaabta, wax badan ka qaado socodka, ama kaqeybgalka safarka dayrta sidoo kale waa xulasho wanaagsan. Iyo xilliga dayrta, cimiladawaa qalalan tahay dadkuna waa ku habboon yihiin in ay naftooda lumiyaan.Sidaa darteed xilliga dayrta, waa inaan ku beeri wanaagga caadada inaad goor hore seexato oo aad goor hore kacdid.
Dayrta sidoo kale waa xilliga goosashada noocyada miraha oo dhan Way fududahay in la cuno miro badan si ay u keento raaxo-darrada caloosha. Intaa waxaa dheer, ka dib markii la galo deyrta, jirkashaqada dheef-shiidka waxay bilaabeen inay hoos udhacaan.Sidaas darteed haddii aad taxaddar la'aan tahay, way fududahay in la helo cudurada caloosha. Sidaa darteed, dayrta waa inay fiiro gaar ah u yeelato ka hortaggacudurada caloosha, cun khudrad si aad ugu fiirsato nadaafada, u diid cuntada qabow iyo cabitaanka qabow, ceyriin iyo bisil waa in lakala saaraa. Baastada qaar, maraq bariis ah iyo cuntooyin kale ayaa karaloo isticmaalaa in lagu nafaqeeyo caloosha.
Xilliga dayrta, waa inaan fiiro gaar ah u leenahay si aan u kululaano iyo buuxinta biyaha waqtiyada caadiga ah. Kaqeybgalka waxqabadyada banaanka qaarkood waxay gacan ka geysaneysaa hagaajinta caabbinta jirka iyo ka fogow qabowga Si kastaba ha noqotee, waa in la ogaadaa taas dayrta marka heerkulku hooseeyo, muruqyada iyo xididdada bina-aadamka ayaa sameyn doona si tartiib tartiib ah u sababi kara kororka vasoconstriction iyo viscidity, hoos u dhaca ku ah kala duwanaanta dhaqdhaqaaqa kala-goysyada iyo hoos u dhaca balaadhinta xididdada .Haddii aynaan yeelin kululee jimicsiga kahor, waxay sababi doontaa dhaawac jilibka oo iskulaabma, muruq xanuun iyo wixii la mid ah. Khubarada ayaa soo jeedinaya in xaddiga jimicsigu aanu noqon mid aad u weyn. Marka waa inaan doorano qaarhawlo fudud oo jilicsan.